IsiGossip Isikolo sinokubhubhisa amalungu ootitshala kunye nabasebenzi
Ootitshala Ulawulo lweSikolo
Kutheni iinqununu kufuneka zisebenze ekunqandeni iNgxowa yesikolo
Utitshala uqhuba umsebenzi ukubonisa iklasi yakhe indlela yokuhleba ngayo inkohliso. Uyathengela into kumfundi kwaye umfundi uyayisongela kwisibini kuze kube yilapho idluliselwe kuwo wonke umfundi eklasini. Oko kwaqala ngokuthi, "Siza kuba neveki ezintathu zentsuku eqala kusasa" iphelile ngokuthi, "Siya kuba nethamsanqa ukuba ngaba abathathu benu ababulawe kule veki." Utitshala usebenzisa lo msebenzi ukuze afundise abafundi bakhe isizathu sokuba ungafanele ukholwe yonke into oyiva.
Ukwaxubusha nokuba kutheni kubalulekile ukuba uyeke ukuhleka kunokuba usincede ukusasaza.
Isifundo esingenhla sibuhlungu kukuba asiqali kuphela kubafundi esikolweni. Ukuhleba kuqhutyana kuyo yonke indawo. Izikolo mazibe yindawo ephephile apho oku kungengxaki enkulu. Ubungcali kunye nabasebenzi ngaphakathi kwesikolo akufanele baqale, bathathe inxaxheba, okanye bakhuthaze ukuhleka. Nangona kunjalo, inyaniso kukuba rhoqo izikolo zijolise ekuhlekeleni inzululuntu kuluntu. Indlu yokuhlala ititshala okanye itafile yathishela kwiindawo zokutyela idla ngokuba yindawo ephakathi kwendawo yokukhwabanisa. Kuyinto engqondweni yokuthi kutheni abantu befuna ukuthetha ngezinto ezenzekayo nabanye abantu. Ootitshala kufuneka bahlale besenza oko bashumayelayo. Ingakumbi abo baye babona impembelelo engalunganga kuye kwabafundi babo. Iinyaniso kukuba umphumo weentlebo unokuba yinto efanayo okanye iyingozi nakakhulu njengomntu omdala.
Xa Uvelwano lubonisa ukuba alukho
Njengomfundisi, unokuningi okuqhubekayo eklasini lakho kunye nobomi ukuba kunokuba kunzima ukuqonda ukuba kuninzi okanye ngaphezulu kokuqhubekayo kuzo zonke ezinye izithuba zokufundela kunye nokusebenza kwabasebenzi.
Ngesinye isihe uvelwano luyabonakala lukhuni xa kufuneka lube yindawo evamile. Inkohliso iyakhathaza ngenxa yokwakha izindonga phakathi kootitshala nabaqeshwa abafuna ukusebenzisana kunye. Kunoko, bayaqhayisa ngenxa yokuba umntu uthethile ngomnye ngomnye umntu. Yonke ingcamango yokuhleba phakathi kwesikhundla sobukolo kunye nabasebenzi bayaphazamisa.
Inkohlakalo ingakwazi ukwahlula isikolo sootitshala kunye nabasebenzi kwisiqingatha kwaye ekupheleni, abantu abachaphazelekayo baya kuba ngabafundi bakho
Njengeenkokheli zesikolo, ngumsebenzi wakho ukuphazamisa ukuhleba phakathi kwabantu abadala kwisakhiwo sakho. Ukufundisa kunzima ngokwaneleyo ngaphandle kokukhathazeka malunga noko abanye bathethayo. Ootitshala kufuneka babuyelelane, bangathethi emva komnye nomnye. Ukuhleba kwakha inxalenye enkulu yeengxaki zakho zokufundisa kunye nabafundi, kwaye kuya kudala iingxaki ezinkulu nakwii-faculty kunye nabasebenzi ukuba ayinakuthathwa ngokukhawuleza. Isisitshixo sokunciphisa imiba yeenkohlakalo phakathi kwesikhundla sakho / abasebenzi ukuba ufundise ngesihloko. Ukusebenza ngokuthe tye kuya kuhamba ixesha elide ukugcina iingxaki zeengxowa kubuncinci. Ncokola rhoqo kunye ne-faculty kunye nabasebenzi bakho ngokuxoxa ngesithombe esiphezulu malunga nomonakalo onokubangela ukuhleka. Ukongezelela, qalisa iqela eliqilileyo ukwakha imisebenzi ebenza ukuba bahlangane kwaye ngokwemvelo babe nobuhlobo obuqinileyo. Xa kuziwa ekuhlekeleni, qiniseka ukuba bayazi ukuba zeziphi izinto ozilindeleyo kunye nendlela oya kuhlangabezana nayo xa kuba ngumba.
Indlela yokwenza ngokukhawuleza ukungquzulana
Kwakhona akunakwenzeka ukuba ube ne-faculty kunye nabasebenzi apho kungekho nto ingqubana.
Umgaqo- nkqubo okanye isethi yemihlahlandlela kufuneka ibe khona xa oku kwenzekayo okukhokelela kwisisombululo phakathi kwamaqela amabini endaweni yokuhlula. Khuthaza i-faculty yakho kunye nabasebenzi ukuba balethe le micimbi kuwe kwaye ube ngumlamli phakathi kwamaqela amabini. Ukuba nabo behleli kunye kunye nokuthetha imiba yabo baya kunceda. Akunakusebenza kuzo zonke iimeko, kodwa kuya kuzinza ngokusisigxina imiba eninzi yeengxabano onayo kunye ne-faculty kunye nabasebenzi bakho. Kungcono ukuthatha le ndlela kunokubakhoxela ngamanye amalungu e-faculty nabasebenzi abangakhokelela kwimibandela emikhulu phantsi komgca.
Indlela Yokubhala Umgaqo-nkqubo Wokubakho KweSikolo ophucula ukuBakho
Iimpawu zeNqununu elungileyo
Iimpawu zeNqununu yeSikolo esiPhezulu
Ukuphela koNyaka woHlolo lokuHlola lweeNqununu
Kutheni iCandelo leNkcubeko yeNkcazo kunye neendlela zokuPhucula
Kutheni Uba nguNcedisi oyiNtloko kuMgangatho oPhakathi okanye oPhakamileyo?
Indima yeNqununu kwiZikolo
Yintoni eyenza uMlawuli weSikolo abe yiNkokeli yeSikolo ephumelelayo?
ILake Mungo, iLandandra Lakes, e-Australia
Isithunywa Sengelosi: Ukuthandaza kuNkulumkankulu uYehudiyeli
Yintoni iKharityhulam efihliweyo?
Indlela yokutshintsha umfundi we-Wheel Stripped
Iindawo kwiKayak kuMlambo weWobowbow
UMansa Musa: Inkokeli enkulu yeBukumkani eMalinké
Ukubuza imibuzo ngesiNgesi
Usebenzisa iItaly Reflexive Pronouns
I-Vaanar Vault kwi-Gymnastic Competition
AbaBhali abaziwayo: Usuku lomnyaka omtsha
Indlela iRinins Resins ikhusela ngayo iMithi kunye nokwandiswa kwexabiso lomthi
Isikhokelo soNcedo lwezeMali kwiSikolo
Yenza, Dlala okanye Hamba ngeMidlalo eyahlukeneyo
Fumana iSigaba sakho seNyanga
IsiNgesi esibalulekileyo esibhalwe ngezempilo ngesiNgesi
Ikholeji yobuGcisa beVermont - izikolo ze-SAT, iiNkcitho kunye neData yeeNgcaciso
Isikhokelo soNyaka weNtshontsho yeNtshonalanga
I-Epiphany yeNkosi yethu uYesu Kristu
Amagama aseNtaliki Ukuqala ngeNcwadi Z
Izinto Ezinokuthi Ungazifunda KwiiRekhodi Zokufa
Kuthetha ntoni "ukusetyenziswa kwegrama"?